Amagagasi kaNazaré: ayini, akhiwa kanjani futhi yiziphi izici zawo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Wonke umhlinzeki we-surfer wake wezwa ngamaza amakhulu kakhulu emhlabeni. Imayelana ne- amagagasi aseNazaré. Athathwa njengohlobo lwamagagasi amakhulu aphule amarekhodi omhlaba eGuinness ngosayizi. Amagagasi eBeastly lawo wonke ama-surfer amaphupho ngesinye isikhathi. Kodwa kungani la magagasi amakhulu enzeka?
Kulesi sihloko sizokutshela ukuthi yini amagagasi aseNazaré nokuthi kungani enzeka.
1 Ayini amagagasi kaNazaré
2 Ukwakheka kwamagagasi aseNazaré
3 Kubikezelwa kanjani amagagasi asogwini
Ayini amagagasi kaNazaré
INazaré yidolobha elincane kakhulu kodwa elihle impela lapho kuhlala khona abadobi ikakhulukazi. Itholakala ku- indawo yesiPutukezi engamakhilomitha ayi-100 enyakatho yeLisbon. Kuze kube yiminyaka eminingi edlule lapho bekungaziwa kubantu abaningi. Kodwa-ke, namuhla le ndawo yaziwa kahle ngoba kunezindawo lapho amagagasi amakhulu aqhekeka khona. Futhi ukuthi la magagasi akwazi ukuphuka phambi kwendlu yawo yesibani futhi abe nosayizi omkhulu kakhulu.
Akudumile kuphela ngama-surfers, kepha zonke izinhlobo zabahambi nezivakashi ezingaphandle kwalo mdlalo. Futhi leli ngelinye lamagagasi amakhulu kunawo wonke ake ashibilika futhi athathwa njengezintaba zamanzi eziyiqiniso. Kunabantu abaningi abazibuza ukuthi kungani kwenzeka kulolu hlobo lwamagagasi kule ndawo. Lokhu sizokuchaza ngendlela elula.
Kufanele wazi ukuthi amagagasi amaningi akhiwa ngomehluko wokujula okhona kwi-morphology yasolwandle. Siyazi ukuthi imisinga yolwandle iqhutshwa umoya nokwehluka kwezinga lokushisa noma usawoti wamanzi. Ngakho-ke, njengoba kunomehluko omkhulu ekujuleni phakathi kweshalofu lamazwekazi kanye nomhosha, kukhona ukugeleza kwamanzi okwenza amagagasi amakhulu enzeke.
INazaré canyon ibhekwa njengomhosha wasolwandle ojule kakhulu kulo lonke ugu lwaseYurophu futhi ungenye yezindawo ezijule kakhulu emhlabeni. Su extension ihlanganisa cishe amakhilomitha angama-230 nokujula kwamamitha ayi-5.000. Lapho ukuqubuka kwesiphepho esinamandla kuvela eWNW kanye nogwini lwaseNazaré, kwenzeka into efisa ukwazi ehilela izinto eziningana: iloli, ithala lamazwekazi kanye nomsinga wasogwini. Ngenxa yalokho, bakha amagagasi amakhulu kunawo wonke emhlabeni.
Ukwakheka kwamagagasi aseNazaré
Lapho amagagasi eqondiswa ogwini lwaleli dolobha, imvamisa ikhula ngokushesha ngoba kunezinhlobonhlobo ezimbili ze-geomorphological eziyibangelayo. Lokhu okuguqukayo kwe-geomorphological, okuyisisekelo se-morphology yengxenye yasolwandle nejubane lomoya, yikho okwenza lezi zinhlobo zamagagasi amakhulu zenzeke. Ukukuchaza kangcono lokhu, ake sithi uLwandle i-Atlantic, lujule kakhulu, Ngokungazelelwe, uhlangana "nesinyathelo" esinciphisa ukujula kolwandle cishe ngokuzumayo. Lolu shintsho ekujuleni kolwandle lubangela ukuvuvukala kucindezele futhi kuqhubekele phezulu.
Ngaphezu kwalokho, esinye isici esenza lolu hlobo lwamagagasi amakhulu ukuthi umsinga wamanzi uhanjiswe ngasogwini ulibangise enyakatho-ningizimu. Lo msinga ofanayo wamanzi oza lapho amagagasi angenayo yiwo onomthelela ekwandiseni ngokwengeziwe ukuphakama kwamagagasi afinyelela ogwini. Ukuze kube nomphumela omkhulu, ukubuyela emuva, okwaziwa nangokuthi amanzi aqhamuka ebhishi elibheke olwandle, kuzokhuphula ukuphakama kwamagagasi ezehlakalo ngamamitha ambalwa. Zonke lezi zinhlobo zokuhlukahluka nezimo ziyenziwa Amagagasi kaNazaré abamba iGuinness World Record yamagagasi amakhulu kunawo wonke ake asakaza.
Kungashiwo ukuthi ukwakheka kwalolu hlobo lwamagagasi amakhulu kunomthelela wamaketanga. Okokuqala umehluko ekujuleni kwe-morphology yasolwandle. Okusho ukuthi, kunezindawo ezinamadwala kanye nama-seounts anezimo zengqondo ezihlukile eziqhathanisa ijubane nokujula amagagasi eza nakho aguqule lokho kujula kubuye. Lo mehluko ekujuleni yilokho okubangela ukwanda kokuphakama kwegagasi futhi njengoba amagagasi ehlangana nomhosha, umsinga wamanzi wendawo uyanda. Isixhumanisi sokugcina kuketanga ngu i-backwash esiza ukuqhubekisela phambili ukwandisa izinga nokuphakama kwegagasi.
Kubikezelwa kanjani amagagasi asogwini
Uma uyi-surfer ohambela izingxenye ezahlukahlukene zomhlaba ukuze abambe amagagasi amakhulu, ukubikezela kwalawa magagasi kubalulekile. Kodwa-ke, amagagasi wokulinganisa olwandle oluvulekile ngumsebenzi onzima kakhulu kunalokho okuzwakalayo. Lokhu kungenxa yokuthi kunokuhlukahluka kokuphakama okubhaliswe ngamaboys nokuthi akunakwenzeka ukuhlukanisa igagasi ngalinye ngawodwana. Wonke ama-buoy agqagqene futhi amagagasi afika evela ezinhlangothini ezihlukile. Ngenxa yalokho, kwasetshenziswa ukukhukhumala kolwandle oluvulekile futhi kukalwa kusetshenziswa amazinga ezibalo. Lokhu, kukalwa kusetjentiselwa kwenta bunyenti bukhulu belamagagasi.
Ngokuphambene nalokho, ukukwazi ukubikezela ukuphakama kwamagagasi ezindaweni ezisogwini kuyinkqubo eqonde kakhulu. Futhi iqiniso ukuthi amagagasi kufanele asebenzise uhlangothi olukhethayo njengoba esondela ezwekazini. Ukwehlukaniswa phakathi kwamagagasi ahlukene kuchazwa kangcono ogwini lolwandle oluvulekile. Ngakho-ke, ungakwazi ukukala kalula ubukhulu bamaza eNazaré futhi ulinganise ukuthi amagagasi azofika kude kangakanani. Ngalokhu, amamodeli wezibalo asetshenzisiwe acabangela ezinye izinhlaka ezifana ne kungamandla omoya kanye nendlela eya kuyo. Kumele futhi unake ezinye izinto eziguquguqukayo njengesimo samaza, ukuqubuka kwangaphansi kanye nesimo sendawo esingaphansi kwamanzi sendawo okukhulunywa ngayo.
Lezi zinhlobo azikwazi ukubikezela ngokunemba okuphelele ukuphakama i-wave ngayinye ezoba nakho ngakunye. Inikeza kuphela isibalo esikhombisa ukuphakama okuvamile amagagasi abanawo lapho efika ogwini. Njengoba sishilo phambilini, kusetshenziswa idatha yezibalo exuba yonke idatha etholwe kusetshenziswa izindlela zokucacisa okwaziwa njengensimbi yaseGaussia.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngamagagasi aseNazaré.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » Amagagasi kaNazaré